Kutakura pasi pamwe nezvinhu pasi peiyo yepamusoro mutoro wekutakura masosi, kambani yedu inotora yakanyanya kupfeka-isingagadzirike, inokonzeresa-kusagadzikana, yakasimba-yakasimba zvinhu, zvinotarisirwa kushanda kwenguva yakareba. Dhizaini yekutakura backplane ndeyehungwaru hukuru. Mune mamwe mazwi, kuiswa kwayo ...
Iyo asphalt paver inoshandiswa kugonesa iyo roller kuti iite iyo yekumanikidza maitiro nekupa yakaenzana pamusoro pechiso uye homogenous precompaction ine yakakwana kugadzikana. Kuita kwakavimbika ndiko kuvimbisa kuzadzisa izvi zvinodiwa. Ese emazuva ano asphalt pavers akaumbwa nezvikamu zviviri zvikuru ...
Achangobva Kumisikidzwa Mapazi muXinjiang Kushandira Nani Kushumira Mashanu Central Asia Nyika
Maererano netsika dzinoverengeka, huwandu hwakazara hwekutengeserana kwenyika dzeXinjiang [Kukosha kwekupinza nekutengesa kunze kwenyika kuXinjiang kunoreva huwandu hwekupinza nekutengesa kunze kwenyika kumabhizimusi eXinjiang pazviteshi zvemunyika.] Mumwedzi mishanu yekutanga ya2021 yaive CNY 51.55. bhiriyoni yaona ...
Yekushandisa Chinyorwa cheiyo Ultrasonic Balance Beam
36-Beam Isiri-Yekubatana Ultrasonic Kuenzanisa Beam Mashandiro Ekushandisa Hwakanaka Hwunouya Kubva Kuhunyanzvi Chitsauko 1 YeMudzvanyiriri Mashandiro Ekuraira Iyi sisitimu inoshandiswa neChinese neChirungu menyu, iyo inonzwisisika uye iri nyore. Ndokumbirawo kuti muverenge kuraira kwebhuku ...